Besalampy hatrany Farafangana : misy onja mahatratra 4 m | NewsMada
Besalampy hatrany Farafangana : misy onja mahatratra 4 m
Par Taratra sur 06/04/2016
Nahazo filazana loko mena tsy ahafahan’ny mpiandriaka mivoaka an-dranomasina intsony omaly ho an’ny morontsiraka atsimo, atsimo andrefana, afovoany andrefana noho ny hamafin’ny onja, araka ny fanambarana avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Manomboka eo Besalampy, hatrany Farafangana no voakasiky ny filazana. Hanan-kery indray ny filazana loko mena manomboka rahampitso hatramin’ny asabotsy ho avy izao amin’ireo toerana ireo ihany. Tokony ho mailo ny rehetra indrindra ny mpiandriaka.
Momba ny toetry ny andro, hanorana tandrifin-drahona any Melaky, Menabe, Nosy Be, Sambirano ary ny morontsiraka ho an’ny faritra Sofia. Handrahona ny andro any Mangoro sy ny faritanin’Antananarivo teo aloha. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin’ny toerana hafa rehetra. Ho mafy hatrany ny tsiokan-drivotra amin’ny tendrony avaratra sy atsimon’ny nosy ny tapany hariva.
Amin’ny ankapobeny, efa ao anaty vanim-potoana fararano isika, ka mifandimby miseho ao avokoa ny karazana toetry ny andro : mangatsiaka, mafana miaraka amin’ny oram-baratra. Hanjaka kokoa ny hatsiaka. Hitoetra hatramin’ny faran’ny volana mey izany fa hiditra amin’ny ririnina ny volana jona izao.
Momba ny rotsak’orana, ho kely raha mitaha amin’ny tokony ho izy ny rotsak’orana ho an’ny tapany atsimo amin’ny faritra Analamanga. Ho ampy kosa izany ho an’ny toerana hafa sisa ao anatin’ny faritra. Ho ambony kokoa raha mitaha amin’ny tokony ho izy ny maripana ho an’Analamanga ihany.